-spring bender -mini trunking -modular trunking -flexible conduit -underfloor ducting -conduit fitting &amp; accessories အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Electrical PVC Rigid Conduit Pipe များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လျပ်စစ်အန္တရာယ်ကာကွယ်စေနိုင်ပြီး Chemical resistance ရှိပြီး Insulation လည်းဖြစ်ကာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဝယ်ယူလိုသော လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် ကျွန်တော်များ MMB Electric တွင် တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည် ခင်ဗျာ။
JUCAI 30HP Screw Air Compressor
7320000 ~ 7320000 Kyats
JUCAI 30HP Screw Air Compressor Model No.: JC30HHA Type: Screw Air Compressor Power: 30HP Pressure: 10 Bar 380V /3Phase / 50 Hz
JUCAI 50HP 12Bar Screw Air Compressor
9900000 ~ 9900000 Kyats
JUCAI 50HP Screw Air Compressor Model No.: JC50XHA Type: Screw Air Compressor Power: 50HP Pressure: 12 Bar 380V /3Phase / 50 Hz
JUCAI Air Dryer 50HP
1680000 ~ 1680000 Kyats
JUCAI Air Dryer 50HP Model No.: JCVP-50A Type: Air Dryer Power: 50HP 220V / 1Phase / 50Hz
1500000 ~ 1500000 Kyats
JUCAI Air Dryer 30HP Model No.: JCVP-30A Type: Air Dryer Power: 30HP 220V / 1Phase / 50Hz
SAIYO Engineering မှ Meiji အမှတ်တံဆိပ် Air Compressor များကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါတယ်။ SAIYO Engineering မှ ရောင်းချပေးသော စက်များကို ကောင်မွန်အောင်ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ maintenance လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း နှင့် Compressor နဲ့ပတ်သက်သော ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ အားလုံးကို ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုသော လူကြီးမင်းများအတွက် SAIYO Engineering တွင် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူအားပေး ခဲ့ကြသော မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ် customer များအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါသည်။
TRE series is one of the most popular centrifugal compressors in the world and its market share is over 80% in Japan. Thanks to various aerodynamic design , low maintenance and easy installation, TRE series is the best matching compressor to customers. We sale machinery, repair, maintenance and parts sale of compressor and relevant apparatus, which are air dryer and piping included.
Kobelco Emeraude ALE series isacomplete new design of the two-stage compressor unit that results inareduction of internal pressure losses, giving you over 8% energy savings over existing models. Furthermore,a plate-fin, the first in the industry, was incorporated for the water-cooled, inter cooler and after cooler, reducing the air pressure loss to 1/5 compared to previous models.
ရာသီဥတုမရွေး သက်တောင့်သက်သာဖြင့် နွေထွေးစွာအပန်းဖြေနိုင်ခြင်း၊ရေကူးကန်၏ အပူချိန်နဲ့အမျှ စောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်း၊ရေကူးကန်အပူချိန်ကို ၃၀ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်မှ ၄၀ဒီဂရီ ထိရရှိနိုင်ခြင်း၊ Electric Heater များနှင့်နိူင်းယှဉ်ပါက လျှပ်စစ်အန္တာရာယ်မှ ကင်းဝေးခြင်း၊ Local engineering Team မှ Annual Service ပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
15000 ~ 30000 Kyats
With an annual production of more than 16 million pump units, Grundfos is one of the world&#039;s leading pump manufacturers. Circulator pumps for heating and air-conditioning and other centrifugal pumps for industry, water supply, waste water and dosing are the major products. Today, Grundfos is the world&#039;s largest manufacturer of circulator pumps, covering approximately 50 per cent of the world market for these pumps.
စားအုန်းဆီ/ရေ pressure စုပ်သောR.P.M-1880rpm ပန့်ဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောရေစုပ်ပန့်ဖြစ်သည်။